Mobile World Congress 2021 - Androidsis အကြောင်း Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
Energizer သည်စမတ်ဖုန်း ၂၆ လုံးနှင့်အတူ MWC 26 တွင်ရောက်ရှိမည်
Energizer သည် MWC 2019 တွင်တင်ပြမည့်ဖုန်းများအကြောင်းစုစုပေါင်း ၂၆ လုံးပါ။ ရှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။
MWC 18.000 တွင် ၁၈၀၀၀ mAh ဖုန်းကို Energizer မိတ်ဆက်မည်
Energizer တင်ပြမည့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက MWC 2019 တွင်စုစုပေါင်း ၂၆ လုံးပါဝင်သောခေါက်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါရှိသည်။
Sony သည် MWC 2019 တွင်ဖုန်းအသစ်များပြသမည်
Sony သည် MWC 2019 တွင်၎င်းတို့၏ဖုန်းအသစ်များကိုတရားဝင်တင်ဆက်မည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိမည်ဟူသောအတည်ပြုချက်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung ကသူ့ရဲ့ 5G ဖုန်းကို MWC 2019 မှာပြသမှာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Galaxy S10 ၏အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်သည်
Samsung မှ 5G ဖုန်းကို Mobile World Congress 2019 တွင်စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာတွင်ကြေညာလိမ့်မည်ဟုအစီရင်ခံစာသစ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။
Sony သည် MWC 1 တွင် Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus နှင့် XZ2018s များကိုပြနိုင်သည်
ဒေတာအသစ်များအရ Xperia XZ1 Premium, Z1 Plus နှင့် XZ1s ဖုန်းများသည် CES 2018 တွင်အလင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ZTE စပိန်နိုင်ငံ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Jia Wei နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိကုမ္ပဏီ၏သတင်းများကိုရှင်းပြရန် ZTE စပိန်နိုင်ငံမှ Marketing Director Yia Wei နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသည်
Alcatel U5 ကိုစတင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုအပေါ်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များမှာမေလမေလအတွင်းယူရို ၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်သင့်အား Huawei ၏ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ Juan Cabrera မှကျွန်ုပ်တို့အားလျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုသင်ကြားပေးသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသည်။
Huawei ၏ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ Juan Cabrera နှင့် MWC17 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် Huawei ၏အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်အပေါ်ကတိကဝတ်ပြုမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။
MWC3မှ Alcatel A17
Alcatel A3 ကို MWC 2017 တွင်စမ်းသပ်ပြီး၊ ကင်မရာအကြီးနှင့်ရှေ့စပီကာနှစ်ခုပါ ၀ င်သောအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းကိုပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်ပြီးနောက်။
Alcatel A5 သည် MWC 2017 တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံခဲ့သည့် LED
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် LED-illuminated back cover ပါတဲ့ဖုန်း Alcatel A5 LED ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါဗွီဒီယိုကိုပထမဆုံးစွဲမှတ်သွားတယ်
Moto G5, ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
Moto G5 ကို MWC 2017 ကာလအတွင်းဗီဒီယိုတွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ လူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်နိမ့်ကျသောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။
Sony Xperia XA1, MWC တွင်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Sony Xperia XA1 ကိုအလယ်အလတ်ဖုန်းဖုန်း၊ ဈေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာများဖြင့် MWC တွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဗီဒီယိုရိုက်ချက်များ
Sony Xperia XA1 Ultra, MWC 2017 တွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Sony Xperia XA1 Ultra ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဗွီဒီယိုအပေါ်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ - Sony ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်မျက်နှာပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကင်မရာတို့၏ထူးခြားချက်
Moto G5 Plus၊ MWC 2017 တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
MWC5တွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံး Moto G2017 Plus ။ အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ပါ ၀ င်သည့်ဖုန်းနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲ
LG G6 ကို MWC 2017 တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
LG G6 ကို MWC 2017 မှာစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းကဘေးဘက် bezels မပါဘဲ ၆.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်၎င်း၏အားကောင်းတဲ့ကင်မရာကိုထောင့်မှန်ဖြင့်အံ့အားသင့်စေသည့်ဖုန်းကိုစမ်းသပ်သည်။
Samsung Galaxy Tab S3၊
MWC3တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောတက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သော Samsung Galaxy Tab S2017 ကိုသင်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစက်နှင့်ပထမဆုံးတွေ့မြင်နိုင်စေရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဂုဏ်အသရေ 6X, ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ
MWC6တွင် Huawei Honor 2017X ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ။ ၅.၅ လက်မ Full HD panel ရှိသောအလယ်အလတ်ဖုန်းတစ်လုံး
Huawei Watch2အမှတ်အသား၊
MWC2တွင်တင်ဆက်ခဲ့သည့် Huawei Watch 2017 ၏ Huawei လက်ပတ်နာရီသစ်၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုရိုက်ချက်များသည်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်ထင်ရှားသည်
Doogee Piano Black သည်ဤ MWC 2017 တွင်ကြွက်သားများကိုပြသသည်
MWC မှ Doogee Piano Black ကထုတ်လုပ်သူသည်ကောင်းမွန်သောဖုန်းကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Huawei P10 Plus၊ ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Huawei ၏ P10 Plus ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးသောဗီဒီယိုသည် Mobile World Congress 2017 တွင်ပြသခဲ့သည်
Ulefone Gemini Pro ကို MWC 2017 တွင်တင်ပြခဲ့သည်
Ulefone Gemini Pro သည်တရုတ်ကုမ္မဏီ Ulefone မှအလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းအသစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ကင်မရာနှစ်ဆနှင့် 10-core ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသည်။
Huawei P10 ကို MWC 2017 တွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသော terminal နှင့်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော hardware
Doogee Shoot 2, ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များ
ဒါတွေအားလုံးကိုယူရို ၇၀ ပဲကုန်ကျမယ့်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Doogee Shoot2ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးငါတို့ထင်မြင်ချက်များဖြစ်သည်။
InnJoo သည်၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်များကို MWC 2017 တွင်တင်ပြသည်
InnJoo သည်နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းသုံးလုံးနှင့်တက်ဘလက်များကိုတင်ဆက်ရန် MWC 2017 ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။
Doogee Y6 Max 3D၊
DoGee Y6 Max 3D ကို ၆.၅ လက်မအရွယ် MWC တွင် သုံး၍ ရုပ်ရှင်သုံးမျိုးကြည့်နိုင်သည်။
Ulefone Power2တွင် 6050 mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်
၎င်းသည် Ulefone Armor 2၊ ၆၀၅၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် 6050 GB RAM တို့၏ထူးခြားသော Ulefone ၏ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။
MWC17 ရှိအရာအားလုံးသည်စမတ်ဖုန်းများမဟုတ်ပါ၊ ARCHOS သည်လျှပ်စစ်ယာဉ်များကိုပြည့်စုံစွာတင်ဆက်ပါသည်
ARCHOS သည်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော MWC17 ပတ် ၀ န်းကျင်၌လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကိုအပြည့်အ ၀ တင်ဆက်သည်
MWC 2017 အတွင်း Android 2.0 နှင့်အတူ Huawei Watch အသစ်ကိုသိရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ခုအသစ်သောမော်ဒယ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတင်ပြ။
အသစ်သော Nokia5နှင့် Nokia6စမတ်ဖုန်းများသည်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ MWC2017 တွင်ပြန်လည်မွေးဖွားရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
ZTE သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်ခုကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 2017 - Blade V8 Mini နှင့် Blade V8 Lite တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Ulefone F1 သည်ထုတ်လုပ်သူ၏အစွမ်းထက်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး MWC 2017 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်
Ulefone သည်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သော Ulefone F1 ကိုအတည်ပြုပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးနှင့် Mobile World Congress တွင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည် (MWC 2017)
LG က X Power2 ဟုအမည်ပေးထားသောစမတ်ဖုန်းကို၎င်း၏ဘက်ထရီကြီးထွားမှုကိုထူးခြားစေသည်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG ကစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပြီးဘက်ထရီကြီးမားသည့် LG X Power2 စမတ်ဖုန်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
Huawei P10, Huawei သည်ဤ MWC တွင်အနိုင်ရသူဖြစ်ပါသလား။
Huawei သည်ဤ MWC အတွက်ကတ်အားလုံးနီးပါးကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ? အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူက Huawei P10 နှင့် Huawei P10 Plus တို့ထက်ပိုသောအရာများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်လျှင်ကော။
Samsung ၏ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းသည် MWC17 တွင်သာရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းရွေးချယ်ရန်အနည်းငယ်သာမြင်နိုင်လိမ့်မည်
ကောလာဟလများအရ Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းသည်အနည်းငယ်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဖက်များအပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ MWC17 တွင်ရှိလိမ့်မည်။
MWC 2.017 မှာဘာတွေတွေ့နိုင်မလဲ။
ကြီးမားသောပျက်ကွက်မှုများအတွက်ဤ MWC ကိုအမှတ်ရလိမ့်မည်။ Samsung နှင့် Xiaomi တို့အကြားဘာအသစ်တွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်အံ့သြစရာအချို့ရှိနိုင်သည်။
LG G6 သည်အလွန်တောက်ပသောအရောင်ရှိပြီးအနက်ရောင်နှင့်တောက်ပသောအရောင်ရှိပြီးယခု၎င်းကိုစောင့်နေသောသူများ၏အတည်ပြုချက်အတွက်ယခုအချိန်တွင်စစ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Huawei P10 ၏ပုံရိပ်နှင့် EMUI ၅.၁ ၏ပွဲ ဦး ထွက်သည်စစ်ထုတ်သည်
EMUI 5.1 သည် Huawei P10 အသစ်တွင် MWC တွင်တင်ပြခြင်းမပြုမီစာနယ်ဇင်းပုံရိပ်များတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမည်။
Ulefone Power2ကို MWC 2017 တွင်တင်ပြမည်
Ulefone Power2ကို MWC 2017 တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် ၆,၀၅၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။
Moto G5 Plus ၏ပုံရိပ်သည် MWC ၏နေ့ရက်များအထိယိုယွင်းသွားသည်
Mobile World Congress တွင် Moto G5 နှင့် Moto G5 Plus ကိုတင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဒုတိယအချက်မှာပေါက်ကြားနေသောသတင်းစာတွင်တွေ့ရသည်။
LG G6 သည် LG G5 နှင့်အတူအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်ဓာတ်ပုံတွင်ထည့်သွင်းထားသည်
ဒီပေါက်ကြားပုံက LG G6 နဲ့ LG G5 တို့ရှေ့မှာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးချင်းယှဉ်ထားပါတယ်။
Samsung Galaxy Tab 3, MWC 2017 တွင် Samsung ကမည်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်စေမည်နည်း။
ဒီ MWC 2017 မှာ Samsung ရဲ့အသစ်အဆန်းတွေကဘာတွေလဲ။ နောက်ဆုံးတွင်ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းကိုတင်ပြမည်လား။ Galaxy S8 ကိုကြည့်မလား?
Galaxy Tab S3 ၏နောက်ဆုံး rendering သည် tablet ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြင့်ပြသသည်
၎င်းကိုတင်ပြပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Galaxy Tab S3 ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြင့် တွဲဖက်၍ မြင်တွေ့ရသည့်စီစစ်ထားသော rendering အသစ်ဖြင့်တင်ပြသည်။
LG G6 လက်နှိပ်စက်အသစ်များသည်၎င်း၏ရေခံနိုင်မှုအားထပ်မံအတည်ပြုပေးသည်
LG G6 ၏ရေခံနိုင်စွမ်းအပြင်၊ အရင်တုန်းကလိုမျိုး multimedia content တွေကိုဖွင့်ဖို့အတွက် 18:9format ရှိလိမ့်မယ်။
Galaxy Tab S3 ၏ပုံရိပ်အသစ်များကဖန်သားမျက်နှာပြင်ကိုပြသည်
Samsung ၏ Galaxy Tab S3 ကိုရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်ပြီးအောင်ပြုလုပ်ထားသည့်ကြီးမားသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ulefone Armor2၏တည်ရှိမှုကို MWC 2017 တွင်အတည်ပြုပြီး၎င်းသည်တုန်ခါမှုနှင့်ကျဆင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်ရေမြှုပ်နိုင်သောဖုန်းဖြစ်သည်။
OPPO သည် MWC ရှိစမတ်ဖုန်းဖြင့်မိုဘိုင်းကင်မရာနည်းပညာအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်
MWC သည် OPPO တွင်နောက်ထပ် protagonists များအနေဖြင့်၎င်း၏ 5x ဟုခေါ်သည့်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံနည်းပညာအသစ်နှင့်အထူးဟန်ဆောင်နေလိမ့်မည်။
LG G6 မှာ 13MP ကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ ၁၂၅ ဒီဂရီထောင့်ရှိမယ်
LG G6 သည် 13MP နှင့် ၁၂၅ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်နှစ်ခုရှိသည့်ကင်မရာနှစ်မျိုးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိလာသည်။
Huawei P10 ၏ပုံရိပ်များသည်သူတို့၏အရောင်များနှင့်အတူရောက်လာသည်
ယခုနှစ် Huawei P10 ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည့် Mobile World Congress အကြောင်းကိုလေ့လာရန်အတွက်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ စစ်ထုတ်သည့်ပုံရိပ်များ
နောက်ဆုံးအနေနှင့် Huawei P10 သည် FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီး Mobile World Congress 2017 တွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Huawei သည်၎င်း၏အထင်ကရစမတ်ဖုန်း P10 ကို MWC တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည်
Huawei P10 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်ကစတင်မိတ်ဆက်မည့် Mobile World Congress တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S8 စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့ကို MWC တွင်ပြသမည်
Mobile World Congress တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Galaxy S8 ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့ကိုထုတ်ဖော်ကြေငြာမည်။
Mediatek ၏ပထမ ဦး ဆုံး 30-core Helio X10 chip စမတ်ဖုန်းကို MWC တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Core chip ဆယ်ခုပါ ၀ င်သောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကို Mobile World Congress တွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Helio X30 chip ကို Vernee မှထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
LG သည်ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့် LG G6 ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအသစ်တီထွင်လိုက်သည်
LG G6 ကိုဘာစီလိုနာတွင်လ၏အဆုံးတွင်ကျင်းပမည့် Mobile World Congress 2017 ၏တောက်ပသောကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။
quad-core ပရိုဆက်ဆာကိုညွှန်းတဲ့ Nokia3သတ်မှတ်ချက်များ
Nokia3ကို Nokia 2017, Nokia6နှင့်ကျော်ကြားသော Nokia5နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အတွက်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 3310 တွင်ပြသမည်။
GFXBench တွင် octa-core ချစ်ပ်၊ 21MP ကင်မရာနှင့် Android Nougat ပါဝင်သည့် Sony Pikachu
Sony Pikachu သည် GFXBench မှတဆင့် octa-core Helio P20 ချစ်ပ်၊ 21MP ကင်မရာနှင့် 3GB RAM; အရာ Xperia XA ၏ဆက်ခံပါလိမ့်မယ်
Samsung Galaxy Tab S3 ၏ပထမဆုံးပေါက်ကြားလာတဲ့ပုံရိပ်
Samsung Galaxy Tab S3 ကို Mobile World Congress 2017 သို့အပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမတိုင်မီယခုပေါက်ကြားသောပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Huawei P10 ကို MWC 2017 အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်
နောက်ဆုံး၌ MWC 2017 သည် Huawei P10 ၏အထင်ရှားဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များကိုတက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
HMD Global သည် MWC6တွင် Nokia3နှင့် Android ဖုန်းအသစ် ၃ ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသည်
MWC 2017 ၏အဓိကသက်သေနောက်တစ်ခုမှာ HMD Global နှင့်၎င်း၏ Nokia6နှင့် Android စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခုဖြစ်လိမ့်မည်။
Lenovo Moto G5 သည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်ဈေးချိုသည်
ကောလာဟလအသစ်များအရ Moto G5 သည်သမားရိုးကျမော်ဒယ်အတွက်ယူရို ၁၈၉ နှင့်ဈေးနှုန်းမှာ ၃၂ GB ရှိကာစျေးနှုန်းမှာ ၂၀၉ ဖြစ်သည်။
Gionee A1, MWC 2017 မှာမြင်ရမယ့်ဖုန်းအသစ်ပေါ့
Gionee သည် Gionee A1 ကို MWC 2017 သို့ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးနှင့်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေမည့်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Huawei Watch2ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် MWC 26 တွင်ကြေငြာမည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ သည် Huawei မှရွေးချယ်သောနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ Huawei Watch 26 ကိုနောက်တစ်ခါတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။
LG G6 စမတ်ဖုန်းအသစ်က၎င်းသည်အတုနည်းကြောင်းနှင့်ပိုမိုစမတ်ကျသည်ဟုပြောကြားသည်။
LG G6 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်မှာဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့မှာနောက်ပြောင်တယ်။
Samsung သည် MWC တွင်ပြသရန်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ခေါက်ထားသည့်ဖုန်းကိုပြင်ဆင်နေသည်
သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုသင်အံ့အားသင့်စေလိုလျှင် Samsung လက်တွင်ကိုင်ထားသောခေါက်နိုင်သောပစ္စည်းသည်ထိုအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Moto G5 Plus ၏ပုံရိပ်အသစ်က၎င်း၏ ၅.၂″ ၁၀၈၀P မျက်နှာပြင်၊ 5,2MP ကင်မရာနှင့်အခြားအရာများကိုအတည်ပြုသည်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Moto G26 နှင့် Moto G5 Plus အသစ်ကို MWC တွင်ပြသမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုသည့်ပုံအသစ်တစ်ခုကျွန်ုပ်တို့ယခုတွင်ရှိသည်
Samsung Galaxy Tab 3, ဒါတွေအားလုံးကငါတို့သိပြီ
Samsung Galaxy Tab S3, MWC 2017 တွင်ပြသမည့်တက်ဘလက်အသစ်အကြောင်းယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည်
Asus ZenFone4သည် ၅.၇ လက်မအရွယ် QHD မျက်နှာပြင်နှင့် 5,7 GB RAM ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်
Asus သည် ၅.၇ လက်မ Quad HD မျက်နှာပြင်နှင့်4GB RAM ကိုတပ်ဆင်မည့် ZenFone 5,7 ၏ terminal နှင့်အံ့အားသင့်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသည်။
LG သည် M6C ၏တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်တွင် GXNUMX ၏ကွေးသောအစွန်အဖျားများကိုပြသခဲ့သည်
LG သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် MWC တွင်ပြုလုပ်မည့်တင်ဆက်မှုအခမ်းအနားအတွက် G6 ၏ဖိတ်ကြားချက်တွင် "ကိုက်ညီသောကြီးမားသောမျက်နှာပြင်" ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။
Samsung သည် Galaxy S8 ထက်ယူနစ်ပိုမိုထုတ်လုပ်မည်
အကြောင်းရင်းမှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Galaxy S7 အစွန်းကို standard version S7 ထက်ပိုရောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Samsung သည်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတူညီသည်
Samsung ၏ Galaxy Tab S3 သည် S Pen နှင့်အတူလာမည်
Samsung က Galaxy Tab S3 တက်ဘလက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်မှာဘာစီလိုနာရှိ MWC မှာကြေညာမှာဖြစ်ပြီး S Pen နဲ့အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်မှာဖြစ်တယ်။
Samsung သည် Galaxy S8 ကို MWC တွင်ပြနိုင်သည်
လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Samsung စီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသောတင်ဆက်မှုအရထုတ်လုပ်သူမှ Galaxy S26 ကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသမည်ဖြစ်သည်
ဆမ်ဆောင်းကဒီလမှာ MWC မှာလာမယ်
Samsung က Galaxy Tab S3 ကိုဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကျင်းပမယ့် Mobile World Congress 2017 မှာကျင်းပမယ်လို့ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Honor 8 Lite ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကို MWC 2017 မတိုင်မီစစ်ထုတ်သည်
MWC 2017 သည် Huawei နှင့် Honor 8 Lite အဆင့်များအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Tab S3 Tablet သည် MWC အတွက် SD820 / 4GB RAM ဖြင့်အတည်ပြုသည်
Snapdragon3chip နှင့် 820GB of RAM တို့ဖြင့်တက်ဘလက်ရှိသည့် Samsung Galaxy Tab S4 ရှိသော်လည်း Samsung သည် MWC တွင်ရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
The BlackBerry Mercury ဟာ Tim Allen တီဗီအစီအစဉ်မှာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပေါ်လာတယ်
Tim Allen သည် The Last Man Standing ၏ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်သူ၏အစ်ကိုကို BlackBerry Mercury, MWC အတွက်ကနေဒါကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းနှင့်ဖုန်းဆက်ပုံရသည်
Sony သည် MWC5တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ် ၅ လုံးအထိတင်ပြမည်
Sony အနေဖြင့် Mobile World Congress 2017 ၏အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လိုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် Xiaomi သည် Mobile World Congress တွင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်
နောက်ဆုံးတွင် Xiaomi သည် Mobile World Congress 2017 သို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း Hugo Barra နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုလေ့လာပြီးနောက်လူတိုင်းအံ့အားသင့်မိသည်
၎င်းသည် LG G6 ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည်
LG သည် G6 အသစ်၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကိုဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့်လာမည့် WMC 2017 တွင်ပြသမည်ဟု Verge ကစစ်ထုတ်သည်။
Nokia ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Snapdragon 835 ချစ်ပ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
Snapdragon 835 မပါ ၀ င်သောကြောင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေမည့်တောက်ပနေသောကြယ်တစ်ပွင့် MWC မှလွဲချော်နိုင်သည်။
Samsung က Galaxy S8 ကို 2017 Mobile World Congress မှာတင်ပို့မှာမဟုတ်ဘူး
ယခင်ကောလဟာလများရှိခဲ့သော်လည်း Samsung သည်၎င်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြု၍ ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 8 တွင် Galaxy S2017 ကိုကြေငြာမည်မဟုတ်ပါ။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္မဏီ LG သည်မိုဘိုင်း၏မူဘောင်အတွင်းတွင်အထူးပွဲကျင်းပခြင်းကိုတရားဝင်ကြေငြာသည့်နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi6ကိုမတူညီသောချစ်ပ်နှစ်ခုဖြင့်ဗားရှင်းသုံးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်
Helio X30 နှင့် Snapdragon 835 သည် Xiaomi Mi6၏မတူကွဲပြားသောမျိုးကွဲများတွင် MWC တွင်ပြသမည့်ချစ်ပ်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
Motorola ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် MWC 2017 တွင်ရောက်ရှိမည်
Motorola အနေဖြင့် MWC တွင်ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ရက်ကိုဂရုစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
MWC 2017 တွင် Android စမတ်ဖုန်းများပိုမိုများပြားလာရန် Nokia မျှော်လင့်နေသည်
တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် Nokia 2017 ၏ဗွီဒီယိုကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက် MWC6တွင်၊ Android နှင့်အတူ Nokia terminal များပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့တွင် BlackBerry Mercury ၏ပုံရိပ်အစစ်အမှန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Android နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ QWERTY ကီးဘုတ်ပါရှိသော terminal နှင့် MWC တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်
Sony သည် MWC 2017 တွင် Xperia Flagship စီးရီးသစ်ကိုမိတ်ဆက်မည်
ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူဆိုနီသည်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် Mobile World Congress 2017 တွင်တင်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိရိယာနှစ်ခုရှိသည်။
Nokia ကို MWC 2017 တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ မှမတ်လ ၂ ရက်အထိဘာစီလိုနာမြို့၌ကျင်းပမည့်အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းပြပွဲကို Nokia MWC 2017 တွင်တက်ရောက်မည်ကို Nokia အတည်ပြု
Apple ကိုလာမည့် Mobile World Congress 2017 တွင်တွေ့လိမ့်မည်
ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့်လာမည့် Mobile World Congress 2017 ကိုအထူး guest ည့်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Apple ရှိနေသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၈၀ ဒီဂရီ Mydlink ကင်မရာများအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြသပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းနှင့်အစစ်အမှန်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်
Virtual reality၊ MWC ၏နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မှန်ကန်သောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးကြာသပတေးနေ့မိုဘိုင်းကမ္ဘာ့ကွန်ဂရက်၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုအဆုံးသတ်သွားသည်။ အခုတော့ပွဲပြီးခါနီးမှာနောက်မှငါနင့်ကိုဆန်းစစ်ချင်တယ် ...
Gionee Marathon M5 Plus သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချောသပ်သောတရုတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
MWC တွင် Gionee Marathon M5 Plus ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများသည်အပြီးသတ်ထွက်ပေါ်လာသည့် phablet၊ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာနှင့်နှစ်ရက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
Gionee S6 သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအရည်အသွေးချောမွေ့သော terminal ဖြစ်သည်
Gionee S6 ကို MWC တွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ဈေးနှုန်းသည်ယူရို ၂၆၅ ခန့်ဖြင့်စျေးကွက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
Waze Europe မှဒါရိုက်တာ Carlos Gómezနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားစေသည့် Waze Europe ၏ဒါရိုက်တာကားလို့စ်ဂေါ့ဇ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်
Zopo မြန်နှုန်း 8, Zopo စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်နှင့်ပထမဆုံးစရိုက်များ
Zopo Speed ​​8 ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်မှုကိုထင်ရှားစေသည့်ထုတ်လုပ်သူ၏အသစ်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ် - ၂၉၉ ယူရို
HTC One A9၊ MWC တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
HTC One A9 ဟုခေါ်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချောသပ်မှုနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Sony Xperia XA ကို MWC မှာစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Sony Xperia XA ကိုစျေးကွက်သို့ယူရို ၂၉၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal တစ်ခုပါရှိသည်။
Sony Xperia X စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဒီ Sony က Titan အသစ်ပါ
Sony Xperia X စွမ်းဆောင်ရည်ကို Mobile World Congress တွင်စမ်းသပ်ပြီး၊ X မိသားစု၏ထင်ရှားသောအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Sony Xperia X ဗီဒီယို၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
ယခုဗီဒီယိုတွင် Sony ၏ Xperia X မိသားစုဝင်ဖြစ်သည့် Sony Xperia X ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။
MWC ရှိ ZTE Axon Mini ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
ZTE Spro Plus သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည့် pico projector ပါသည့် tablet တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောအချောသပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းရှိသော MWC 2016 တွင် ZTE Nubia My Prague ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ
Samsung နှင့် HTC တို့သည် Mobile World Congress တွင် Virtual အဖြစ်မှန်တွင်အဓိကကစားသမားနှစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး Gear VR နှင့် Vive တို့ဖြစ်သည်
LG, Sony နှင့် Xiaomi တို့သည်ချိတ်ဆက်ထားသော gadget များသည် Mobile World Congress မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာများ၏အင်တာနက်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်
Zopo Iberia ၏စီအီးအိုဗစ်တာပရာ့စ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါသည်
Zopo Iberia ၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဗစ်တာပရန့်စ်နှင့်အင်တာဗျူးအပြီးတွင်သူသည်စပိန်သို့ရောက်ရှိနေသောကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Xiaomi က Mi 4S ကိုတရုတ်ထုတ်ကုန်အတွက်ယူရို ၂၆၀ အောက်သာရောင်းချမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
Xiaomi သည်ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင် Mi5ကိုတင်ဆက်ပြီးနောက်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ယခု Mi 4D ကိုယူရို ၂၆၀ ဖြင့်ကြော်ငြာပါ
Xiaomi မှ Mi5ကို ၅.၁၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,15 နှင့်လက်ဗွေဆင်ဆာပါရှိသည်
Xiaomi သည် Hugo Barra ၏ Mi 16 ကို MWC5 တွင်တင်ဆက်ပြသခြင်း၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ Xperia X ကင်မရာကတကယ်ကိုမြန်ဆန်တယ်
ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ Sony Xperia X ကင်မရာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင်အလားအလာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်
D-Link Iberia ၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအန်တိုနီယိုနာဗာရိုကသင်၏အိမ်ကိုလွှမ်းမိုးရန်သူ၏ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြသည်
mydlink အိမ်သုံး android အိမ်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းများကို အသုံးပြု၍ သင်၏အိမ်ကိုမည်သို့ domotize လုပ်ရမည်ကိုပြသသည်။
Huawei MediaPad M2, Huawei ၏ ၈ လက်မတက်ဘလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Huawei သည် MWC2သို့ယူဆောင်လာသည့် phablet အသစ်ဖြစ်သော Huawei Mediapad 2016 ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးသောထင်မြင်ချက်များ
Oppo ၏ Super VOOC သည် ၂၅၀၀mAh ဘက်ထရီကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအားသွင်းသည်
OPPO သည် ၁၅ မိနစ်အတွင်း ၂၅၀၀mAh ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်မည့်မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာအဖြစ် MWC မှ Super VOOC ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ဘာစီလိုနာရှိ MWC2016 တလျှောက်လမ်းလျှောက်
ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်သော MWC2016 ကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ခြင်း။
Samsung Galaxy S7 နှင့် S7 အစွန်းကိုနိုင်ငံပေါင်း ၆၀ တွင်မတ်လ ၁၁ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
မတ်လ ၁၁ ရက်တွင် Samsung သည် Galaxy S7 နှင့် S7 အစွန်းကိုနိုင်ငံပေါင်း ၆၀ တွင်ဖြန့်ချိမည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင်သန်း ၄၀ ကျော်ဖြန့်ဝေမည်ဟုမျှော်လင့်သောမိုဘိုင်း
Sony Xperia X နှင့် Xperia XA စျေးနှုန်းများကိုဥရောပတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးယခုတွင်ကြိုတင်ရောင်းချရန်အတွက်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
မနေ့က MWC တွင်တင်ပြပြီးနောက် Sony Xperia X နှင့် Xperia X တို့၏စျေးနှုန်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S7 Edge၊ ဗီဒီယိုဆန်းစစ်ခြင်း
Samsung Galaxy S7 Edge၊ နှစ်ဆကောက်ကျစ်သောဘေးဘောင်အတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Samsung ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဗီဒီယိုရိုက်ချက်များ
Samsung Gear 360 ဆိုလျှင် Samsung ၏360ºကင်မရာဖြစ်သည်
Samsung Gear 360 သည်မှန်ဘီလူး ၂ ခုပါသည့်နယ်ပယ်ဖြစ်ပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီရိုက်ကူးနိုင်သည့်အတွက်ကင်မရာသည် ၃၆၀ ဒီဂရီမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy S7၊
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေပါလာတဲ့ Samsung ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S7 ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဗွီဒီယိုအပေါ်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
ACER သည် MWC တွင် Liquid Z630S နှင့် Liquid Zest ကိုတင်ပြသည်
Acer သည် MWC တွင်လောင်းကြေးအသစ် ၂ ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည် - Liquid Z630s နှင့် Liquid Zest
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ ZTE သည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင် ZTE Blade V7 နှင့် Blade V7 Lite ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
MWC တွင် HTC သည်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်စမတ်ဖုန်းသုံးမျိုးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - Desire 530, Desire 630 နှင့် Desire 825
Samsung ၏ Galaxy S7 နှင့် S7 Edge အသစ်ကို MWC တွင်ပြသလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
Xiaomi Mi5 ၏ Live ဖြစ်ရပ်သည်ဘာစီလိုနာရှိ MWC16 မှ Streaming မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။
Samsung Unpacked 2016 ကို MWC16 မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ
Samsung Unpacked 16 ပွဲကိုကြည့်ရှုရန်နှင့် Samsung Galaxy S2016 နှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်အဆန်းများကိုလေ့လာရန် MWC7 မှတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်သည်
ဤအရာများသည် MWC 2016 တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်သတင်းများဖြစ်သည်
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် MWC 2016 တွင်တွေ့ရမည့်သတင်းများအားလုံး၊ Samsung သို့မဟုတ် Huawei ကဲ့သို့သောကြီးမားသောထုတ်လုပ်သူများ၏တင်ပြချက်များကိုပြသပါလိမ့်မည်။
ARCHOS မှ ၅.၅ လက်မ၊ ၁၀၈၀p Display၊ 2GB RAM နှင့် Android 5,5 Marshmallow နှင့်အတူ Diamond 1080 Plus ကိုကြေညာခဲ့သည်။
Archos သည် Diamond2Plus နှင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Android 5,5 Marshmallow နှင့် 6.0GB RAM ပါသောဖုန်းအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။
Xiaomi မှ Mi5တရားဝင်တရားဟောပွဲ၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော "Insanely fast"
လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာ MWC မှာတွေ့ရမယ့်ဒီ terminal ရဲ့ရူးသွပ်မြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ထားတဲ့ Xiaomi Mi5ကိုတရားဝင်လှောင်ပြောင်သရော်ထားတာပါ။
Archos သည် MWC7တွင် ၇၊ ၈ နှင့် ၁၀ လက်မတက်ဘလက်အသစ်သုံးခုကို Android 8 နှင့်€ 10 အောက်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
Archos သည်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် MWC တွင်တက်ဘလက် ၃ ခု - အောက်စီဂျင် ၇၀၊ အောက်စီဂျင် ၈၀ နှင့် ၁၀၁ ခအောက်စီဂျင် - Android 70 Marshmallow
Xiaomi Mi5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၎င်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီစစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Mi5နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကို MWC တွင်တင်ပြမည့်ဒီ terminal အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုလက်ထဲမှာကိုင်ထားထားပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S7 ကို ၁၄ စက္ကန့်ကြာသောဗီဒီယိုဖြင့်စီစစ်ထားသည်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုအား YouTube သို့တင်ခဲ့သည်။ ထိုတွင် Samsung Galaxy S7 ကို ၁၄ စက္ကန့်ကြာအောင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
AnTuTu - Snapdragon ပါသည့် Samsung Galaxy S7 သည် Exynos SoC ရှိမော်ဒယ်ထက် ၂၀% ပိုများသည်
Samsung Galaxy S7 နှင့် Samsung Galaxy S7 Edge တို့၏တင်ဆက်မှုသည်အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ လာမည့်…
Lenovo မှသတ္တုကိုယ်ထည်ဖုန်းကို MWC တွင်ပြသမည်
Lenovo သည် MWC တွင်ဖုန်းကိုသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြသမည်။ သို့မဟုတ်ပါက Lenovo Lemon3၏ဗားရှင်းသည်အိန္ဒိယစျေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်သည်
Samsung က Android 6.0 Marshmallow နဲ့လာမယ့် Galaxy S7 မှာတွေ့ရမယ့် edge panel ရဲ့အဓိကပစ္စည်းအသစ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်
ARCHOS 50d Oxygen ကို ၅ လက်မ ၁၀5p မျက်နှာပြင်၊ MediaTek octa-core ချစ်ပ်နှင့် 1080 MP ကင်မရာတို့ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
ARCHOS သည် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ octa-core MediaTek ချစ်ပ်နှင့် 50 MP ကင်မရာပါဝင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် 5d Oxygen ကိုတင်ပြသည်။
Xiaomi ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူသည်ဓာတ်ပုံ ၂ ခုတွင် MI5၏အရည်အသွေးအရည်အသွေးကိုပြသခဲ့သည်
MWC ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Xiaomi သည် Mi5၏ဓာတ်ပုံ ၂ စီးကိုမျိုချခဲ့ပြီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ပျံသန်းနေစဉ်ပြသနေသည်။
Galaxy S7 အစွန်း၏ပုံရိပ်နှင့်၎င်း၏ AnTuTu ရမှတ်ကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှာ MWC မှာပြသမည့် Galaxy S7 အစွန်းသစ်၏ပထမဆုံးပုံရိပ်နှင့် AnTuTu ရမှတ်ရှိသည်။
အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုကတော့ GFXBench က Xiaomi Mi5မှာ ၅.၇ ဗားရှင်းရှိမယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်သည် Xiaomi Mi 5,7 သည်၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်စွမ်းအားကိုပြသရန်သွားသောအခါ GFXBench ပြသသောအရာဖြစ်သည်
Samsung ကဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Unpacked event ကို Galaxy S21 မှာကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်
Samsung သည် Unpacked ဖြစ်ရပ်ကို MWC တွင်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းတွင် Galaxy S7 အသစ်နှင့်အခြား terminal အချို့ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်
အထူးသဖြင့် Las Vegas ရှိ CES ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် Sony သည်ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပါ။ မိုဘိုင်းဌာနခွဲ ...
ကောလာဟလအသစ်အရ Iris scanner ကြောင့် Galaxy S7 စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်
Iris စကင်နာသည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တင်ဆက်မည့် Samsung Galaxy S7 ၏စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည့်အဓိကတရားခံဖြစ်သည်။
Samsung သည် Galaxy S7 ကို MWC 2016 တွင်ပြသခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် Mobile World Congress တွင် ၄ င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသော Galaxy S7 ကိုပြသနိုင်သည်။